जनतालाई सिटामोल पाउन गाह्रो तर नेता र पहुँचवालाको उपचारमा राज्यको चार अर्ब खर्च – Himalitimes
२०७७ कार्तिक १७ ०५:३३ मा प्रकाशित
काठमाडौ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ०६२-६३ पछि एक दशकभित्र राज्यले पहुँचवालाको उपचारमा तीन अर्ब ८८ करोड नौ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव उपचारका लागि अमेरिका र भारत जाँदा राज्यकोषबाट एक करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यादव अमेरिका जाँदा उपचार खर्च मात्र होइन, तीनजनाका लागि आतेजाते हवाईभाडा, होटेल खर्च, डा. यादवलाई दैनिक तीन सय र सहयोगीलाई दैनिक डेढ सय डलर पनि राज्यकोषबाट नै खर्च भएको थियो ।
अझ राष्ट्रपति भएका वेला उपचारका लागि जापान पनि गएका थिए । विशिष्ट पदमा भएको व्यक्तिको उपचारका लागि विदेश जाँदा सहायता नभएर राज्यको दायित्वका रूपमा खर्च हुने गरेको छ ।
‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ मा आठ प्रकारका जटिल रोग लागेका नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता दिने उल्लेख छ ।
मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, पार्किसन्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेलका बिरामी सहायताका लागि दाबेदार हुन् । तर, उपचारमा जति रकम लागे पनि नागरिकले बढीमा एक लाख रुपैयाँको सहायता पाउँछन्, तर नेताले भने एकैजनाले दुई करोडसम्म लिएका छन् । (नयाँ पत्रिकाबाट )
हारसंगै पन्जाब आइपिएलको लिग चरणबाटै बाहिरियो